Nchịkọta Azụmaahịa Onlinentanetị: Nkọwa Nkọwa | Martech Zone
Mgbe ụfọdụ, anyị na-echefu otú anyị miri emi na-azụ ahịa na-echefu nnọọ inye onye iwebata ihe bụ isi teminoloji ma ọ bụ acronyms ndị ahụ na-ese n'elu mmiri ka anyị na-ekwu maka ịre ahịa n'ịntanetị. Kechioma n'ihi na ị, Adaba etinyewo nke a Informacation nke ire ere 101 na-ejegharị gị site na niile nke bụ isi Okwu ahia ahia ịkwesịrị ijide mkparịta ụka gị na ndị ahịa ahịa gị.
Mgbakwunye Marketing - Chọta ndị mmekọ dị n’èzí iji zụọ ngwaahịa gị n’aka ndị na-ege ha ntị maka ọrụ.
Banner Ads - na - adọta uche ndị ahịa lekwasịrị anya ka ha pịa ị gaa na saịtị gị ma ọ bụ mara karịa akara gị.
Oge Ochie - Sifts site na idei mmiri nke ọdịnaya ịntanetị & handpicks ihe ndị dị elu ịkekọrịta, na -emepụta akụkọ nkwụsị ọ bụla maka ndị otu ahịa gị.
content Marketing - Na-eweta ọdịnaya na-enye aka, na-atọ ụtọ, ma na-atọ ụtọ dịka ntanetị blog, ebook, vidiyo & infographics iji dọtakwuo uche, wuo ikike ikike, ma merie azụmaahịa ọhụrụ.
Contextual Mgbasa ozi esighi na - egosiputa mgbasa ozi na otu weebụsaịtị dabere na ọdịnaya ya, ma ọ bụ hyperlink akọwapụtara isiokwu na ebe nrụọrụ weebụ nke onye mgbasa ozi.
Ntughari Ọnụego Mgbanwe - na-eji nchịkọta na nzaghachi onye ọrụ iji melite weebụsaịtị gị ma gbanwee ihe nchọgharị na-akwụ ụgwọ ka ndị ahịa kwụọ ụgwọ.
Digital Marketing - na - emepụta enweghị ahụmịhe, ahịa ndị ahịa jikọtara ọnụ n'ọtụtụ dijitalụ dijitalụ - gụnyere mobile, egwuregwu, & ngwa, pọdkastị, redio Internetntanetị, izi ozi SMS, na ndị ọzọ.
Ngosipụta Mgbasa ozi - na - adọta uche ndị ahịa lekwasịrị anya ka ha pịa ị gaa na saịtị gị ma ọ bụ mara karịa akara gị.
Mgbasa Ozi - mgbe ndị ahịa na-agbasa ụfụ maka gị site na okwu ọnụ.
email Marketing - Na - ezigara ndị nnata ozi na - enyere aka, dị mkpa, iji mee ka ha soro ụlọ ọrụ gị rụọ ọrụ ma wuo iguzosi ike n'ihe.
Inbound Marketing - na-adọta, na-azụlite, na-agwa, ma na-atọ ndị ahịa nwere ike ịnweta site na itinye ọdịnaya, SEO teknụzụ, yana ngwaọrụ mmekọrịta, iji merie azụmaahịa ma nweta iguzosi ike n'ihe ndị ahịa.
Marketing ahịa - na - ewuli mmekọrịta na otu ndị mmadụ ahọpụtara na - emetụta mkpebi ịzụrụ ahịa gị.
Idu Nurturing - Iwulite mmekorita ya na ndu nke na adighi njikere ịzụta site na ọdịnaya di egwu, ozi ịntanetị na-enye aka, njikọta mmekọrịta mmekọrịta.
Ndu isi - Inyocha akparamagwa nke omume ntanetị iji chọpụta ogo nke mmasị ha na ngwaahịa gị, na-ekenye akara iji soro ọnọdụ onye ahịa ọ bụla nwere oghere ahịa.
Ahịa ahia - na-emegharị ngwa ahịa ahịa na-emegharị ugboro ugboro ma na-agwa gị otu omume ndị ahịa iji nyere gị aka ikpebi ozi ziri ezi iji zigara onye ziri ezi n'oge kwesịrị ekwesị.
Mobile Marketing - Na - eziga ozi ederede ahaziri ahazi, nzipu ozi, mgbasa ozi ngwa, nyocha QR, yana ndị ọzọ na ekwentị mkpanaaka dabere na omume ụfọdụ, dị ka ọnọdụ ma ọ bụ oge ugbu a.
Mgbasa Ozi Obodo - mepụta ọdịnaya ederede ahaziri nke dabara na saịtị saịtị ndị na-ebipụta ihe n'ịntanetị, wee kwụọ ụgwọ itinye ya n'akụkụ isiokwu ndị ọzọ nke saịtị ahụ.
Mmekọrịta Ọha na Ọha - Mmetụta mgbasa ozi na ịntanetị na obodo, na-elekwasị anya n'ihe ndị mmadụ na-ekwu banyere ụlọ ọrụ na ntanetị ma na-achọ ụzọ ọhụrụ iji jikọọ na ndị ahịa.
Nwepu Media - ezigbo ulo oru gi: ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị, ebe nrụọrụ weebụ, blog, na ibe mgbasa ozi.
Mediagwọ Media - mgbasa ozi akwụ ụgwọ, akwụkwọ nkwado, ma ọ bụ nyocha akwụ ụgwọ.
-Kwụ ụgwọ-Kwa-Pịa (PPC) - Na-elekwasị anya ndị ahịa ụfọdụ site na njikọ nkwado, yana ule A / B iji hụ mgbasa ozi na-ebute ọtụtụ clicks.
Remarketing - gbadoro mgbasa ozi nye ndị mmadụ gaalarịị na saịtị gị (mana ha azaghị zụta) site na izipu ozi ma ọ bụ onyinye naanị.
Azụmaahịa Nchọta (SEM) - meziwanye ọhụhụ saịtị na peeji nke nsonaazụ ọchụchọ, na-eme ka saịtị dị elu site na SEO, saturation & backlinks.
Search Engine Optimization (SEO) - tinye ntinye okwu ọchụchọ kacha elu n'ime ibe weebụ nke ụlọ ọrụ iji bulie nsonaazụ ọchụchọ engine, ma hụ na saịtị gị kachasị maka igodo, ọdịnaya, mkpado meta-meta, na njirisi njikọ inbound.
Mgbasa ozi na-elekọta mmadụ - Na - agbatị ụlọ ọrụ gị na ndị ọhụụ ọhụrụ site na mgbasa ozi akwụ ụgwọ ma ọ bụ nkwalite posts na saịtị mgbasa ozi mgbasa ozi dị iche iche.
Social Media Marketing - Na - eme ka amata ngwa ahịa na ntanetị site na iwulite obodo nke ndị ahịa site na mgbasa ozi mmekọrịta.
Gbasaa Ule - nnwale aghara aghara ebe a na-anwale ụdị A / B na otu ndị kpuru ìsì iji hụ nke na-eweta nsonaazụ kachasị nke ọma.
Inye Ọdịnaya - mepụta ọdịnaya ederede ahaziri nke dabara na saịtị saịtị ndị na-ebipụta ihe n'ịntanetị, wee kwụọ ụgwọ itinye ya n'akụkụ isiokwu ndị ọzọ nke saịtị ahụ.
Ngosipụta: Ana m eji njikọ njikọ anyị maka Adaba ke ibuotikọ emi.
Tags: Mgbakwunye marketingmgbasa ozi ọkọlọtọnchịkọta ọdịnayacontent Marketingmgbasa ozi gburugburu ebe obibintụgharị mgbanwe njikarịchadigital marketinggosipụta mgbasa oziakwụ ụgwọ mgbasa oziemail Marketinginbound marketingahịa ahịandu nurturingndu akaraeme okwuakụrụngwa ahịaOkwu ahia ahiaahịa efunwa afọ mgbasa ozimmekọrịta ọha na eze n'ịntanetịnwere mgbasa oziakwụ ụgwọ mgbasa ozikwụọ ụgwọ kwa Pịappcna-emegharị ahụahịa search enginesearch engine njikarịchaAelekọta mmadụ mgbasa ozimgbasa ozi na-elekọta mmadụSocial Media Marketinggbawara n'etiti ulenkwado ọdịnaya
Na-abụghị Demographics: Tydị nke ndị na-ege ntị na-ege ntị nke na-eme ka mmekọrịta dị nro
Kedu ihe bụ ihe ga-eme ka usoro mgbasa ozi gị ga-eweta nloghachi na ego?